Wadajir 19-Ciise: Ciise, ma wuxuu ka joogsaday inuu noqdo dhakhtarkan weyn, dhakhaatiirta takhaatiirta? Gacaliyahayga, Madow / Afrikaanka "Idaha", laakiin xaggee buu Ciise Masiix, oo ah dhakhaatiirta? Xaqiiqdii, in kabadan 1034 wadaaddada, hoggaamiyaasha kiniisadda iyo wadaaddada ayaa u dhintey cudurka Corona | KONGOLISOLO
Wadaad-19: Ciise miyuu joojiyay inuu noqdo takhtarkaas weyn, oo ah takhaatiirta takhaatiirta? Gacaliyahayga, Madow / Afrikaanka "Idaha", laakiin xaggee buu ciise masiix, oo dhakhaatiirtu tageen? Xaqiiqdii, in kabadan 1034 wadaad, wadaaddo iyo wadaaddo ayaa u dhintey fayraska Corona
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 8, 2020 00: 00 1 Comment
Wakiilkaaga oo ah Wiilka Ilaahaaga reer binu Israa'il dhulka, Pope Francis (Bergoglio), wuxuu go’aansaday inuu xiro wax walba oo ku yaal Fiktooriya oo uu u cararo Argentina, oo ah waddankiisii ​​hooyo; qasab ku noqoshada xeryaha, isaga oo ka tagaya aragtiisii ​​Quduuska ahayd.
Wakiilkaaga mala-awaalkaaga ah Eebbe wuxuu waqtigan ku xaddidan yahay meel aamin ah sida dhammaan wadaaddada kale ee khaaska ah, rasuullada iyo nebiyada. Dhammaantood waxay sugayaan sayniska inay xal iyo dawo u helaan fayraska Corona si markaa ay ugu soo noqdaan dhawaaqyo isku mid ah oo ku saabsan Ciise caan ah.
Waqtigan xaadirka ah, fiisaha wuxuu u eg yahay burburka Antiquity. Dhammaan kaniisadaha hurdada (oo si khalad ah loogu yeedho saacadda digniinta) Dunida waa la xiray maxaa yeelay waa kuwa aan waxtar lahayn. Hadana dhakhaatiirta, cilmi baadheyaasha iyo saynisyahannadu waxay noloshooda halis gelinayaan si ay adduunka u badbaadiyaan. Waxay u shaqeeyaan si adag, habeenno hurdo la'aan, si looga helo panacea ka soo horjeedda Wadaag 19-aad. Hagaag, marka la soo koobo, su’aashaydu waa mid fudud:
Aaway ciise masiix oo ah dhaqtarka dhaqaatiirta? Meeday hooyo Maryan tagtay, hooyadaa Eebbe, gabadha barakada leh oo barakaysan weligiis ?? (...). Aaway quduusiintii oo dhan iyo barakada Ilaah subkay? Waa kuwee kuwa ugu caansan Catholics ee naftooda u huraya wejiga feyruska Corona ??
Waa waqtigii in Madowga / Afrika Masiixiyiinta, maahmaahda iyo kuwa waalan, ayaa indhaha iyo dhegaha u furaya: Masiixiyada waa ururin ururin iyo dhamaad, halyeeyo aan macquul ahayn iyo khuraafaad ' Ganacsade kasta wuxuu ku noolyahay qarashka dhageystaha, intaas kadib.
Farqiga u dhexeeya Blacks / French iyo Whites / Faransiis: Madowga / Faransiiska waa Faransiis la'aan, awood la'aan, si xun ayaa loola dhaqmaa oo si xun ayaa loo arkaa "Waxay ku qoran yihiin Faransiiska oo keliya warqad" ... (VIDEO)
Saamaynta jaahilka iyo isbeddelka Masiixiyada; halkan waa asalka jaahilka ee magaca Ciise: marka loo eego diinta Giriigga, Apollos the Sun Ilaah wuxuu lahaa wiil la yiraahdo Asclepius / Asclepius dhanka kale wuxuu lahaa dhowr gabdhood, mid ka mid ah oo la yiraahdo Iaso ama Ieso oo ahaa ilaahyadii Gariigta. bogsashada
ugu da'da weyn Inta badan ayaa codeeyay
27 / 04 / 2020 2 h 50 min
Ciise wuu ku mashquulsan yahay f **** siinta dadka kale ee la midka ah ee cadaanka ah si loo abuuro sheeko cusub oo Coronavirus! Kuwa madowga ah ee sida dhabta ah u aaminsan waxa loogu yeero Ciise waa inay ku gubi doonaan cadaabta maalin uun!
Aug12 01: 38
roob aad u culus
Qayb daruur leh